Fianakaviam-piteny altaika - Wikipedia
Ny fiteny altaika dia fianakaviam-piteny tenenina ao Eorazia, hatrany Torkia sy Môldavia ka hatrany Azia Atsinanana, mandalo an' i Azia Afovoany, an' i Siberia ary any amin' ny faritra farany atsinanana ao Rosia. Isan' io fianakaviam-piteny io ireo fiteny torkika sy ireo fiteny tongoza, ary koa ny fiteny kôreana sy ireo fiteny japônika. Avy amin' ny anarana hoe Altay izay anaran' ny tandavan-tendrombohitra ao Azia Afovoany, izay mitsinjara amin' i Sina sy i Kazakstàna sy i Môngôlia ary i Rosia, ny hoe altaika.
Mifanaraka ny mpahay teny amin' ny fisian' ny teoetra iombonan' ireo fiteny ao amin' ity fianakaviam-piteny ity, izay mahakasina ny fanasokajiana ara-drafitra sy ara-boambolana, nefa tsy mifanaraka amin' ny fanazavana azo omena ny amin' izany. Tamin' ny taonjato faha-19 dia noheverina fa tarana-piteny iray razana ireo fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny altaika ireo. Tamin' ny antsasany faharoa tamin' ny taonjato faha-20 anefa dia nihevitra ny mpahay teny maro fa izany fifanahafana izany dia vokatry ny fifampikasoan' ny mpiteny ireo fiteny ireo nandritra ny tantara, izay mety niteraka fifampidramana toetra: ny fiteny altaika dia mety vondrom-piteny ara-jeôgrafia tany aloha. Mitohy izany tsy fitovoan-kevitry ny mpahay teny izany hatramin' izao.
1 Ny fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny altaika
1.1 Fianakaviam-piteny torkika
1.2 Fiteny môngôlika
1.3 Fianakaviam-piteny tongoza
2 Ny fiteny kôreana sy ireo fiteny japônika
3.1 Fianakaviam-piteny lehibe
Ny fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny altaikaHanova
Ny fitsinjara'ireo fiteny altaika. Manga: fiteny torkika; mena: fiteny tongoza; mavo: fiteny koreana; vollomparasy: fiteny japonika; mena antitra: fiteny aino
Amin' ny hevitra mifintin' ny anaran' ilay fianakaviam-piteny dia mahafaoka vondrom-piteny (na sampam-piteny) telo izany, dia fiteny torkika, ireo fiteny môngôlika ary ireo fiteny tongoza.
Ny fianakaviam-piteny torkika dia fianakaviam-piteny ahitana fiteny miisa manodidina ny 30 mitsinjara ao amin' ny faritra malalaka izay mivelatra avy any Eorôpa Atsinanana ka hatrany andrefan' i Sina sy avy any Kiprosy (na Sipra) hatrany Siberia, ka ny fiteny torka sy fiteny azery ary ny fiteny ozbeka no be mpiteny indrindra amin' izany.
Ieto avy ny fiteny lehibe ao amin' io fianakaviam-piteny io miaraka amin' ny isan' ny olona miteny azy avy:
Fiteny torka: 75-90 tapitrisa
Fiteny azery: 25 tapitrisa
Fiteny ozbeka: 25 tapitrisa
Fiteny kazàka: 16 tapitrisa
Fiteny oigora: 10 tapitrisa
Fiteny tatara: 7 tapitrisa
Fiteny torkmena: 7 tapitrisa
Fiteny kirgizy: 4 tapitrisa
Fiteny baskira: 2 tapitrisa
Fiteny tsovasa: 2 tapitrisa
Ny fianakaviam-piteny môngôlika dia fianakaviam-piteny any Azia Avaratra sy any Azia Afovoany. Isa' ny fiteny môngôlika ny fiteny môngôly (na môngôliana) izay tetenina ao Môngôlia sy ao Môngôlia Anatiny. Fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny môngôlika ny fiteny oirata tetenina ao amin' ny tapany avaratra andrefan' i Sina, izay atao hoe fiteny kamika na fiteny kalmoka na fiteny kalmokia ao Rosia, ny fiteny boriata ao Boriatia any Rosia sy any avaratr' i Môngôlia sy Môngôlia Anatiny, ny fiteny môgôly any Afganistàna.
Ny fianakaviam-piteny tongoza dia fianakaviam-piteny ao Azia Avaratra sy Azia Atsinanana, izay tenenin' ireo vahoaka tongoza. Mitsinjara ho sampam-piteny telo io fianakaviam-piteny io, dia ireo fiteny tongoza avaratra sy ireo fiteny tongoza atsimo-andrefana ary ireo fiteny tongoza atsimo-atsinanana.
Ny fiteny kôreana sy ireo fiteny japônikaHanova
Efa nanomboka amin' ny taona 1960 no nieritreretan' ny mpahay teny ny hanakambana ny fiteny kôreana sy ireo fiteny japônika (ahitana ny fiteny japôney sy ny fiteny roikio) amin' ny fianakaviam-piteny altaika. Ny fiteny aino (izay notenenina tao Hokkaido sy Sakhalina ary ao amin' ireo nosy Korila) dia indraindray ampifanakaikezina amin' ny fiteny altaika, nefa heverin' ny maro fa fiteny manirery izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fianakaviam-piteny_altaika&oldid=1002047"
Dernière modification le 8 Martsa 2021, à 08:05
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2021 amin'ny 08:05 ity pejy ity.